बिहानै उठेर यी काम गर्दा दिनभर दिमाग फ्रेस हुने | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
बिहानै उठेर यी काम गर्दा दिनभर दिमाग फ्रेस हुने
सबैरै बिहान उठेर जिम, योग र एक्सरसाइज जस्ता फिजीकल एक्टिविटी गरिन्छ । तर, शरीरको साथसाथै दिमागको पनि काम गराउनु आवश्यक पर्छ । शरीरका अंगलाई जति चलायमान गराउनुपर्छ त्यत्ति नै दिमागलाई पनि ताजा राख्नु जरुरी हुन्छ । बिहानै आछ्यानमा नै केही काम गर्दा दिमाग दिनैभर दौडिने गर्छ । र दिनको पनि राम्रो शुरुवाती हुनछ । दिमागको एक्सरसाइज गर्दा तनाब हुदैन र तपाई दिनभर काममा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ ।
१. बिहानै उठेर केही पढ्ने
पढ्ने कार्यले दिमाग तेजिलो बनाउछ, दैनिक जस्तो व्यस्तताले हामीलाई पढ््ने समय कम मिल्दछ । बिहान पढ्ने बानी राख्दा दिमाग ताजा हुन्छ । बिहानको समयमा कुनै किताब, अखबार, पत्रिका वा केहि अनलाइन आटिृकल पनि पढ्न सकिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार बिहानै पढ्नाले पुरै दिन आरामले गुज्रनेछ , साथमा दिमाग सहि दिशामा चल्नेछ ।
२. ध्यान गर्ने
तपाईँको पुरै दिन आनन्दले बिताउनको लागि दैनिक ध्यान जरुरी हुन्छ । ध्यान गर्नाले तपाई काममा केन्द्रित भई मनै देखि गर्न सक्नुहुन्छ । यसका साथै ध्यानले डिप्रेशन र तनाव पनि कम गराइदिन्छ । ध्यान गर्नाले आत्मिक शान्ती मिल्नसका साथै तपाईलाई वरिपरिका वातावरणप्रति जागरुक बनाइदिन्छ । ध्यान तपाईको दिमागको लागि सबैभन्दा स्वस्थ एक्सरसाइज हो ।
बिहान उठेपछि आफुलाई मनपर्ने म्युजिक बजाउनु् पर्छ । ब्रेकफास्ट तयार भइन्जेल म्युजिक बजाइराख्नु पर्छ । यो म्युजिक चर्को नभई मधुरो हुनु पर्छ । मधुर संगीतमा दिमाग प्रोडोक्टिविटी बढाउदछ, विज्ञहरुले भनेका छन् क्लासिकल म्युजिकले व्यक्तिको सोच्ने क्षमता बढाउदछ ।
४.चुनौतीपुर्ण खेल खेल्ने
बिहानै उठेर दिमागलाई दौडन शुरु गराउनु पर्छ । यसको राम्रो एक्सरसाइजको लागि चुनौतिवाला खेल खेल्नु उत्तम हुन्छ । चाहे त्यो अखवारको होस् वा पजल होस् अथवा अनलाइन खेल होस् स्वस्थ दिमागको कारण नशा पनि बलियो हुन्छ ।
शारीरीक कसरतको असर दिमागमा पनि पर्ने गर्छ । कसरत गर्दा सम्झने शक्ति तेजी हुने गर्छ । कसरत गर्दा रगत सर्कूृलेशन बढी हुन्छ, कसरतको साथमा दिमागको पनि कसरत हुने गर्छ ।
किन चीनतर्फ ढल्केको भन्दै ट्रम्पले डब्लुएचओमाथि उठाए प्रश्न
एजेन्सी, २७ चैत्र । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई चीन केन्द्रित
अमेरिकामा डेढ करोड बेरोजगार
एजेन्सी, २७ चैत्र । अमेरिकामा बेरोजगार संख्या हप्तैपिच्छे बढिरहेको छ । त्यहाँ डेढ करोडभन्दा बढी
साउदी राजपरिवारमा कोरोनाको महामारी, राजा र राजकुमार आइशोलेशनमा
एजेन्सी, २७ चैत्र । साउदी राजपरिवारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । कम्तिमा पनि १५०
इटालीमा कोरोनाबाट एक सय डाक्टरको मृत्यु
एजेन्सी, २७ चैत्र । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ । त्यहाँ
इटलीमा एक सय चिकित्सकको मृत्यु, करिब १० प्रतिशत सङ्क्रमित
२७ चैत : इटलीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भेटिएको दिनदेखि अहिलेसम्म १०० चिकित्सकको कर्तव्य पालनाका शिलशिलामा
युवा-खेलाडीलाई राहत र उद्धारमा परिचालन गरिने छ : खेलकूदमन्त्री विश्वकर्मा
कास्की,२७ चैत : युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगत्बहादुर विश्वकर्माले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध सामाजिक दूरी कायम राख्दै